Vaovao - Ahoana no anombohan'ny BULL Stacker Crane ny fitahirizana marani-tsaina ny entana mavesatra?
Ahoana no anombohan'ny BULL Stacker Crane ny fitahirizana marani-tsaina ny entana mavesatra?
Bull series stacker craneno fitaovana tsara indrindra amin'ny fikarakarana zavatra mavesatra milanja mihoatra ny 10 taonina.Ity karazana crane stacker ity dia manana ny toetra azo itokisana avo lenta sy ny fahaiza-manao enta-mavesatra.Miaraka amin'ireo singa fork mora ampiasaina amin'ny fikarakarana entana isan-karazany, dia manome vahaolana amin'ny fitahirizana pallet izy io.
Enta-mavesatra hatramin'ny 15.000kg;
Ny haavon'ny fametrahana hatramin'ny 25m;
Mifanaraka amin'ny haavo sy ny enta-mavesatra;
Mampiseho ny fampifangaroana tonga lafatra amin'ny famolavolana injeniera sy ny teknolojia fametahana pallet.
2. azo antoka
Amin'ny fampiasana ny fampandehanana ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po matetika, ny fanekena ny adiresy photoelectric na ny fanekena ny adiresy laser, dia manana ny toetran'ny fampandehanana ny hafainganam-pandeha tsara sy ny fahitsiana avo lenta;
Ny fomba fanaraha-maso elektrônika dia manana fanaraha-maso manual, mandeha ho azy an-tserasera, ary mandeha ho azy amin'ny Internet, izay azo fidina tsy misy dikany;
Ny tsipika fifandraisana sliding fiarovana dia ampiasaina hampifandraisana ny famatsiana herinaratra amin'ny fitaovana fampitana herinaratra, izay azo antoka sy azo antoka;
Ny fitaovana fiarovana fiarovana dia azo antoka sy feno;
Izy io dia azo ampiasaina miaraka amin'ny talantalana avo lenta, sehatra fitehirizana ao anatiny na rafitra fitehirizana anatiny sy fitaovana hafa, ary afaka manao hetsika miverimberina ao amin'ny habaka telo (mandeha, manainga, ary maninjitra amin'ny lafiny roa) amin'ny filaharana iray.Mba hamitana ny asa fikarakarana ny vondrona palletized na naka entana ho any an-trano sy ivelan'ny trano fanatobiana entana.
Compact rafitra, fahamarinan-toerana tsara, ary mandinika tanteraka ny fepetra takiana amin'ny ergonomics;
Ny fitaovana manohitra ny fihodinana dia apetraka eo amin'ny sehatry ny entana, ary fehezin'ny cylinder elektrika sy switch elektrika, ny toerana dia azo amboarina ho azy araka ny haben'ny entana mba hisorohana ny entana tsy hihodinkodina amin'ny hatraiza;
Ho an'ny entana mihodinkodina dia namboarina sy novolavolaina ny fork miendrika V avo lenta;
Ny firafitry ny vy amin'ny fuselage dia mampiasa lasantsy voaaro entona CO2 sy fifandraisana bolt matanjaka.
Ho fanampin'ny fampiasana azy amin'ny fitehirizana mandeha ho azy ny coils vita amin'ny vy manokana (toerana mavesatra be loatra), dia azo ampiasaina amin'ny indostria mavesatra hafa (afa-tsy trano fanatobiana entana madio).
Amin'izao fotoana izao, nyomby andian-dahatsoratra stacker crane rafitraefa be mpampiasa.Ampio ny mpanjifa amin'ny toe-javatra mavesa-danja hahatratra ny fampihenana ny vidiny sy ny fanatsarana ny fahombiazan'ny dingana manontolo amin'ny alàlan'ny fanavaozana marani-tsaina ny lozika sy ny fanatobiana entana.
Conveyor, Asrs Storage, Baby Shuttle, Drive amin'ny Racking, Shuttle amin'ny lalana efatra, Carton Live,